Guddiga doorashooyinka Puntland oo ku dhawaaqay liiska musharixiinta ururada ee Eyl, Ufayn iyo Qardho.
September 11, 2021 Xuseen 3
Puntlandtimes (Garoowe)-Guddiga kumeel gaarka ah ee doorashooyinka Puntland ayaa galabta ku dhawaaqay musharixiinta golayaasha deegaanka degmooyinka Eyl, Qardho iyo Ufayn oo ay bisha October ee sanadkaan doorashooyin hordhac ah ka qaban doonaan.
Xubnaha musharixiinta golayaasha deegaanka ee ay soo gudbin karaan 9-ka urur siyaasadeed ee ku tartami doona degmooyinkaasi ayaa lagu salayn doonaa sharciga Law 7 iyadoona urur siyaasadeed walba awood u lee yahay soo gudbinta xubno gaaraya inta kursi ee degmadaasi ama tiro ka yar oo uu ku kalsoon yahay inaya uga soo bixi karaan.
Guddiga doorashooyinka ayaa ugu dambayn 9-ka galabnimo ee maanta waxa ay qaban doowaan diiwaanada kaama dambaysta ah, waxaana ururkii aan ku soo gudbin musharixiintiisa waqtiga kama dambaysta ah laga reebi doonaa loolanka saddexda degmo inkastoo uu xaq u lee yahay ka tartanka 51 degmo ee dhimman.
Taranka ka qabsoomi doona saddexda degmo ayaa noqon doona mid aan lagu kala saarin shaqsiyaad ama xildhibaano haseyeeshee waxaa ku tartami doona ururo siyaasadeed maadaama lagu geli doono Liistada Furan oo macneheedu yahay in codka aan qof la siin doonin ee urur la siin doono.
Waa wax aan loo baahanayn in doorasho tijaabo ah wax loogo yeeray in kago qabto.
Maamuladii Soo maray Puntland oo dhan waxa ay ka midaysanyihiin,
in aan wax horumar ah gaba yar aster aan laga gaarin in shacabka hois tags maamulka Puntland ay si dimoqoraadi ah u doortaan,madaxda maamul goboleedka iyo kan deegaan.
Waa nasiib daro in mudo ka badan, 22 Sanadood,weli aysan Puntland u gubin in shacabka reer Puntland ay iyago leeyihiin in ay doortaan lmaamulka cida qabanaysa .
Shacab walba ee dunida ku nool waxa ay u guud een in la doorto madaxda si hufan oo sharci ku dhisan.
Maamulka Deni oo aysan daacad ka ahayn in dhacay Puntland sy doortaan cida matalaada,waxaa tussale u ah sidii uu kaligii uu boobsy oo weliba aan laga hadal sharci cuna dii uu ku soo xulay xildhibaanada Puntland u matala ya aqalja sare ee Baarlamaan ka federaalka ee Soomaaliya.
Deni iyo kuwii ja horeeyeyba ma aha kuwo sameeyey wax lago xasuusto ee xagaa dimoqoraadiyada,balse nidaamkii beelaha ee kago heshiiyey bay baal mareen,wax ay hagaajiyaan haba hoogte.
Cabdullaahi elmi, sxb miskiin baatahay mana jirto wax xigmad leh oo aad u sheegtay dadka reer puntland ee gobta ah ee isku tashaday waxaan ognahay ineeysan jirin maamul la tartami karo puntland, doorashada waa tijaabo waana guuul caalamka iyo somalida kale ay bogaadiyeen, adiga iyo farmaajo iyo inta idinkufikirka ah wax yar ayaa idiin haray waana la idinka qaban dalkaan waayo waxaatihiin virus ama karoone 19 ku dhexjira adduunka iyo soomaalida.
Ali hadalkaagu wuxuu u egyahay kooxihii kaadiriinta iyo siyaad barre. Beentii iyo propogaandadii kacaanka ayey faafin kirren. Siyaad barre wadankii oo lagu kala cararay ayuu lahaa Beeraha aan falano. Deni oo aan ognahay sidii uu aqalka sare u maamulay ee uu dumaashidii, eedooyinkiis keenay ayaa doorasho hufan oo xalaala qabanaya waa hadal malagiis galay. The worst nepotism of puntland history happened in front of our eyes.
“ ma anaa mindiyo la ii qarshaaa laygu qalan doono”
Midowga Yurub oo dalab hordhigay M/weyne Farmaajo & Rooble oo khilaaf ka dhexeeyo. by Xuseen | posted on September 18, 2021